बुटवल कोरोना अस्पतालबाट थप ४ जना ‘डिस्चार्ज’ | Mechikali Daily
बुटवल कोरोना अस्पतालबाट थप ४ जना ‘डिस्चार्ज’
Posted By: रमेश पराजुलीon: २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १३:४२
बुटवल, जेठ २१ । कोरोना संक्रमण तीब्र भएसँगै उपचारपछि निको भएर घर फर्किनेको संख्या पनि बढदै गएको छ । बुधवार बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालबाट १ जना स्वास्थ्यकर्मीसहित ४ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
अस्पतालका फोकल पर्सन तथा वरिष्ठ कन्सलटेन्ट डा. सुदर्शन थापाले कपिलवस्तुका ३ जना र कोरोना अस्पतालमा कार्यरत १ जना स्वास्थ्यकर्मी निको भएर घर फर्किएको जानकारी दिए । निको हुनेमा कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका–८, बुद्धभूमि–१३ र यशोधरा गाउँपालिका–१ का छन् । स्वास्थ्यकर्मी अर्घाखाँचीकी हुन् । उनी अस्पतालमै कार्यरत थिइन् । उनीहरू सबै वैशाख २९ गते भर्ना भएका थिए । यससँगै धागो कारखानाको अस्पतालबाट निको भएर घर फर्किनेको संख्या १९ जना पुगेको छ । अस्पतालमा ३५ शय्या छन् । अस्पतालको आईसीयूमा ३ जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
कपिलवस्तुका २ जना र दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका १ जना पुरुषमा डेंगु र निमोनिया देखिएपछि उनलाई बुटवल रिफर गरिएको थियो । उनको पनि आईसीयूमा उपचार भइरहेको डा. थापाले जानकारी दिए ।